Abantu Daily ukukhiqiza owawudinga imfucuza, kangangokuthi ngisho ongaziwa ukuthi inkinga kabusha liye laba nezokusigcoba muva. Esikhathini umkhakha babe nemibono yabo, futhi kwamanye amazwe ziyimpumelelo ngakho kulesi ukuthi ngisho ukungenisa udoti kusuka reprocessing.
Inkinga global yokungcola
isintu Daily yakha omningi doti. izinto Industrial futhi yezokwelapha futhi izinsalela lemali omkhulu epulasitiki, ingilazi, iphepha, ngisho konke ulahlwa ngendlela nekhono elula ukuphila ovamile. Ukucubungula kabusha imfucumfucu ihlanganisa kuphela ingxenye encane lowo doti. Yonke enye into e-zokulahla futhi kancane ushevu le imvelo, ngisho noma lokhu doti into enobuthi. Nature ukunweba iphepha, plastic, polyethylene akulungile - kungathatha njengoba inani elincane isikhathi, futhi emashumini noma ngisho namakhulu eminyaka. intuthuko kwezobuchwepheshe, kuye kwanikeza isintu eziningi imikhiqizo emisha, kodwa futhi nomthelela ukuvela izinto okungelula kuncike kwamazinyo nokucubungula okusheshayo organic, ngisho noma kudingeka. Kuyinto muva nje ukuthi abantu ucabanga ngokungathí sina kule futhi baqala ukucabanga indlela yokulungisa isimo nje mbhangqwana yokugcina eminyaka. Ngeshwa, abantu ulindele uhambo olude nzima, ezihilela ukwenqaba onobuhle akhona ukusetshenziswa okungenangqondo.
Okwamanje, kunezinhlobo ezintathu iziqondiso ethembisayo ezingasiza ukususa inkinga, ikakhulukazi uma indlela eqotho. Okokuqala, kubalulekile ekuthuthukiseni izinto okubolayo. Ucezu omkhulu udoti - iyona emaphaketheni: .. Izikhwama zeplastiki, amabhokisi, njll Paper, amakhadibhodi, kanye nezinye izinto ezintsha - lokhu kuyisinyathelo esifanelekile ukuhlanza iplanethi.
Eyesibili ngesilinganiso - nesibopho emphakathini. Waste ukuhlunga - kungcono into elula angayenzela imvelo umthengi abavamile. Phela, uma division uzobe wahlanganyela kakade ujwayelene ukubunjwa yonke uyakhishwa, ukuthi kuhle ukuba ugcine isikhathi namandla. A udoti ihlelwa kuyoba lula kakhulu ukuze zisetshenziswe.
Ekugcineni, esinye isilinganiso kuhlobene owedlule eyodwa - ekhuthaza kabusha ukusetshenziswa. Amaphakheji, iphepha, uplastiki namabhodlela izitsha - konke lokhu anganika ukuphila yesibili, kanye ukuhlehlisa isikhathi lapho kuyoba kudoti.
Zonke lezi zinyathelo zinhle ngendlela yazo, nakuba kungaba kokubili ngempumelelo futhi ubonise lusizo zabo - incike kulokho izinqubomgomo uhulumeni siyofeza futhi iziphi kulezi zindlela izosetshenziswa ukunciphisa inani udoti.
Kukhona isimo sokunquma eziningana ngawo ukwehlukana udoti ngezigaba ezahlukene. Phakathi kwabo kukhona lokhu okulandelayo:
umsuka - imfucuza ekhaya nasezimbonini (ukucutshungulwa, ekukhiqizeni ngamanani amancane, njll ..);
njengoba - okuqinile, uketshezi, gaseous;
by ekilasini ingozi - 5 ezigabeni ezisetshenziswa eRussia.
Udoti eyenziwe amabhizinisi, kuqhakambisa kwasekuqaleni. Okokuqala, lokho akusizi endaweni ukukhiqizwa olulodwa, kungaba unento ewusizo olukhulu, enye. Okwesibili, ukusetshenziswa noma ukucubungula kwemfucumfucu yezimboni kuyadingeka ngenxa yokuthi imvelo enobungozi kungenziwa eziqukethwe kubo imvelo kanye nokusetshenziswa komuntu. Ngezinye elifanayo uchitha isikhathi mndeni cishe asinakekele kuze themselves futhi eqinisweni ngokuvamile umkhaya Russian uphehla amakhilogremu angaphezu kuka-400 ngonyaka. Kule mass nengxenye - epulasitikini futhi imfucuza yephepha. Ngesikhathi esifanayo ukwehlukana futhi kabusha imfucuza kamasipala Russian Federation esungulwe ngokuphelele.
izinhlobo ezahlukene imfucuza zidinga izingeniso ezihlukahlukene. Inani elikhulu izinto eziyingozi kuwumphumela ukucutshungulwa petroleum kanye nokusebenza ugodo kusebenziswe futhi izimboni zamakhemikhali. Inkinga eyinhloko ukuthi ukucutshungulwa ezimbonini akwenzeki ngaso sonke isikhathi, khona-ke kuphela indlela ukuqeda kubo - wangcwatshwa landfill noma ukukhiqiza ukwelashwa ukushisa.
Kufanele futhi ishiwo plastic ukuthi is kabanzi ukuphila komuntu. ukusetshenziswa kwalo kunzima ngenxa yokuthi ukuthi imfuyo ihlukaniswe izinhlobo eziningi, ngayinye esidinga indlela ehlukile. Ngaphezu kwalokho, ukucutshungulwa ezishisayo zepulasitiki, isb umane evutha ngokuvamile akunakwenzeka ngoba kule nqubo, kwakheka omningi izinto ezilimazayo. Ngesikhathi esifanayo noqhekeko organic kuthatha isikhathi esiningi.
Iqembu ngalinye kufanele asebenzise izindlela zayo, ukuze ngisho nangaphambi anawo udoti kuyadingeka ukuze siyixazulule:
Ukuze ukwelashwa begazi imfucuza eziphilayo zivelaphi efanelekayo. Paper, amakhadibhodi, ukudla udoti kungenziwa composted washiya ukubola. Esikhathini esizayo, angasetshenziswa kwezolimo. Ngezinye izikhathi ngisho le ndlela kusetshenzwe izindwangu zemvelo.
Metal sokuncibilikisa obala ngokuphelele futhi basetshenziswe. Inkinga eyinhloko kuphela ekuhlaleni ngokwahlukana yayo kusukela, isibonelo, izinto zikagesi, kulahliwe endaweni landfill.
ukwelashwa ukushisa ezahlukene indlela, uma sikhuluma imfucuza ukhuni ukucubungula. Ukusebenzisa amandla omlilo eluhlaza bangathola ethile namandla.
Nokusebenzisa kabusho imikhiqizo esisebenzile plastic kusetshenziswa mechanical (ukugaya) nezindlela zamakhemikhali. Ngokuvamile, in the eminye polymers inoveli etholakala angasetshenziswa ngokuphindaphindiwe.
Ecabangela ukungcwatshwa kwami. Imikhiqizo imfucuza eyingozi kakhulu babhekana inqubo ekhethekile, okubandakanya ngabodwa zabo esiphezulu kusukela imvelo ngaso ngokwanele eside. Ngemva kwesikhathi esithile, base ngokwemvelo ukubola noma zithunyelwa kwamanye amazwe ukuze izinyathelo eziqhubekayo kabusha.
kukadoti wayesengaba umthombo obengeziwe kokubili amandla kanye izinto zokusetshenziswa. Ngakho, i-West kungaphansi nokulahla yesithathu imfucuza Imininingwane, okunye ngandlela-thile noma beya emsebenzini ukuze uphinde usetshenziswe. Ngaphezu kwalokho, kuvumela ukulondoloza ku ukukhiqizwa energy kanye izinto, akukho ukunqwabelana imfucuza ngesimo zokulahla ebukekayo futhi eziyingozi.
ERussia, ngeshwa, akunjalo. imfucuza ukuhlunga uhlelo isakhasa, cishe akatholakalanga amabhokisi nge linezingxenye amaningi. ingxenye encane kuphela kusho noma isiphi isinyathelo, ucishe wazakhela plastic kabusha, kodwa ngisho lokulandisa% 5-7 kuphela. Ezinye izindaba zika-lemali uwela ngaphansi landfill.
Ososayensi zinikeza ezihlukahlukene izindlela zokwenza ukucutshungulwa imfucuza eyingozi kangako nokuningi ewusizo. Ubuchwepheshe iphila kunazo Ubonakala labo letisita imfucuza ukubola yezingxenye yasekuqaleni futhi yokusetshenziswa kabusha kamuva. Lezi izindlela imvelo kwezomshado kakade esetshenziswa imodi test eYurophu nase akakabi egculisayo.
Ukucubungula kabusha imfucuza - inkinga ukuthi ilethe abadwebi eziningi kanye Okugweda emsebenzini, ibangela ukukhala umphakathi. Abaklami Canadian ukudayisa izingubo thunga kusuka edayisa izinsimbi materials. Kuyindida ke kungenziwa igqoke yize kuyintando ewubuciko kakhulu. ngokuqinile Architectural kusukela Netherlands uhlongoza ukusungula imfucuza iziqhingi yokufakelwa, lapho ayengase baphile zababaleki ababevela kuwo asobala. Okokugcina, hudolzhnitsa American owaziwa Liza Houk isebenzisa kudoti imidwebo yakhe, impikiswano futhi othakazelisayo. Ngakho-ke akudingekile ukuba ukhulume mayelana esiyingqayizivele ingozi imfucuza.